ShortStack: ချစ်သူများနေ့၏လူမှုမီဒီယာပြိုင်ပွဲအတွေးအခေါ်များ Martech Zone
Valentine's Day သည်ငါတို့အပေါ်သို့ရောက်နေပြီ ဖြစ်၍ ၎င်းသည်ဖြစ်လိမ့်မည် စားသုံးသူအသုံးစရိတ်အဘို့ကြီးစွာသောတစ်နှစ်။ သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကိုတိုးမြှင့်လိုက်သည်နှင့်အမျှဆိုရှယ်မီဒီယာကို အသုံးပြု၍ အချိန်မီလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်သင့်သည်။ ShortStack ဒီဇိုင်နာများ၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အေဂျင်စီများအတွက်စျေးနှုန်းသက်သာသည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောမျက်ရည်က ShortStack ဒီ infographic ကို Valentine's Day Facebook ပြိုင်ပွဲအတွေးအခေါ်များဖြင့်တီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အချိန်ကာလ၏စမ်းသပ်မှုကိုခံနေရဆဲအလွန်ကောင်းသောစာရင်းဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူများထုတ်လုပ်သည့်အကြောင်းအရာများကိုစုဆောင်းရန် Valentine's Day ပြိုင်ပွဲများ
မင်းရဲ့ Valentine ပြိုင်ပွဲကဘယ်သူလဲ။ ပရိတ်သတ်များကိုမိမိ၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၊ ကလေးများသို့မဟုတ်အခြားထူးခြားသည့်အခြားအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုတင်ရန်ပရိသတ်များအားပြောပါ။
ချစ်သူများနေ့ရဲ့လက်မှုအနုပညာသို့မဟုတ်အလှဆင်ပြိုင်ပွဲ - ပရိသတ်များအားသူတို့၏အကောင်းဆုံးအိမ်လုပ် Valentine's Day အလှဆင်ပုံတစ်ခုတင်ရန်တင်ပါ။
ချစ်သူများနေ့နေ့ဗီဒီယိုပြိုင်ပွဲ - ပရိတ်သတ်များအားသူတို့၏စံပြ Valentine Day ကိုကျင်းပသည့်ဗီဒီယိုတို (ဥပမာ Instagram) ပြုလုပ်ရန်ပြောပါ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲကိုပြပါ - ပရိသတ်များအားသင့်ကုန်ပစ္စည်း (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေသည့်ဓါတ်ပုံများကိုတင်ရန်ပြောပါ။
သုံးစွဲသူများထံမှထိုးထွင်းသိမြင်မှုရရှိရန်အတွက် Valentine's Day ပြိုင်ပွဲများ
ချိုမြိန်ဆက်ဆံမှုစာရွက်ပြိုင်ပွဲ - သင်တန်းသားများသည်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံး Valentine Day အကြောင်းအရာကိုဓာတ်ပုံနှင့်အတူတင်ပါ။
ပုံပြင်ပြိုင်ပွဲ - သင်၏ပရိသတ်များအား၎င်းတို့နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့၏သိသာထင်ရှားသောအခြားအရာများအားမည်သို့အဆိုပြုထားခြင်းအကြောင်းပုံပြင်များဝေမျှရန်ပြောပါ။
မတ်ေတာပေးစာပြိုင်ပွဲ - သင်၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများအကြောင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုစာရေးရန်သင့်ပရိသတ်များအားပြောပါ
ပရိသတ်များနှင့်နောက်လိုက်များအားပါ ၀ င်ရန် Valentine's Day ပြိုင်ပွဲ
လူမှုမီဒီယာသည်တုံ့ပြန်မှုများရရန်မေးခွန်းများမေးရန်အလွန်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်။ ဤအရာတစ်ခုခုကိုကြိုးစားကြည့်ပါ ပြီးပြီ တွစ်တာ (သို့) ဖေ့စ်ဘုတ်တွင်တင်ထားသောစာမူများ -
ပြီးအောင်လုပ်ပါ “ အချစ်ဆုံးအချစ်သီချင်းသည် ______ ဖြစ်သည်”
ပြီးအောင်လုပ်ပါ "စိတ်ကူးယဉ်ဆုံးရုပ်ရှင်ကတော့ ______"
ပြီးအောင်လုပ်ပါ “ ကျွန်ုပ်အချစ်ဆုံးရက်စွဲမှာ ______ ဖြစ်သည်”
ပြီးအောင်လုပ်ပါ "အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ဘဝသည်အချစ်ဟာသတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လျှင် ______ ဖြစ်လိမ့်မည်"
ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရရန် Valentine Day ကိုပြိုင်ပွဲများ
ထုတ်ကုန် - တစ်ရက်လက်ဆောင်တစ်ခု - သင်၏ပေးကမ်းမှုတစ်ခုစီအတွက်နေ့တိုင်းဆုချသည်။
တစ် ဦး ကမြှင့်တင်ရေး -a- တစ်နေ့ Giveaway - လက်ဆောင်တစ်ခုစီ၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်လျှော့စျေးသို့မဟုတ်အခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်ထူးခြားသောအရောင်းမြှင့်တင်ရေးကုဒ်တစ်ခုကိုထုတ်ဖေါ်ပါ။
တစ် ဦး ကပေါင်းစပ် Giveaway - Yoru ၏တစ်နေ့တာလက်ဆောင်ပေးခြင်းမှတဆင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆုများ (ကူပွန်များ၊ အထူးလျှော့စျေးများ၊ အထူးနှုန်းများကုဒ်များ) ကိုမျှဝေပါ။
ဤပြိုင်ပွဲအများစုသည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်များပေါ်တွင် မူတည်၍ အချို့မှာသင်၏ဖောက်သည်များ၊ ပရိသတ်များ၊ နောက်လိုက်များဖြစ်သည်။ သင်ပြိုင်ပွဲမှအချက်အလက်များကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကောက်ယူလိုပါကမှတ်ချက် / တူသောတင်သွင်းသူကိုသုံးပါသို့မဟုတ်ပြိုင်ပွဲကဲ့သို့သောစင်မြင့်ပေါ်တွင်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါ ShortStack.
မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုသင်၏ပရိတ်သတ်အခြေစိုက်စခန်းသည်သင့်ကိုချစ်မြတ်နိုးပါလိမ့်မည်။ သင်မျှဝေခြင်းကိုမက်လုံးပေးပါကသူတို့၏အနိုင်ရနိုင်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုတိုးမြှင့်ပါကသူတို့သည်သင့်ကို ပို၍ ချစ်မြတ်နိုးပါလိမ့်မည်။
သင်၏ Valentine's Day ပြိုင်ပွဲကို ShortStack တွင်ကျင်းပပါ
ပြိုင်ပွဲဝင်ရန်မှတ်ချက်ပေးပါ - သင်၏ Facebook နှင့် Instagram ရေးသားချက်များတွင်မှတ်ချက်များအားလုံးကိုချက်ချင်းဆွဲထုတ်ရန် ShortStack ကိုအသုံးပြုပါ။ ထည့်သွင်းသူများသည်မှတ်ချက်ပေးသူ၏အသုံးပြုသူအမည်၊ သူတို့ထားခဲ့သည့်မှတ်ချက်နှင့်မှတ်ချက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်တို့ပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျပန်း entry selector ကိုသုံးပြီးအနိုင်ရသူတစ် ဦး သို့မဟုတ်များများဆွဲရန်သုံးပါ၊ ပြီးရင်သင်၏ Facebook Page နှင့် Instagram profile တွင်အနိုင်ရရှိသူများကိုကြေငြာပါ။ ထို့အပြင်၊ Facebook ပေါ်တွင်သင်သည် Likes post ကို entries အဖြစ်ဆွဲနိုင်သည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Hashtag ပြိုင်ပွဲ - hashtag ပြိုင်ပွဲသည်အသုံးပြုသူမှထုတ်လုပ်သောအကြောင်းအရာ (UGC) ကိုစုဆောင်းရန်၊ အမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်တိုးပွားစေရန်နှင့်ပရိသတ်အသစ်သို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိသော UGC ကိုဖော်ပြရန် ပို၍ လွယ်ကူပြီးမည်သူမဆိုသင်၏ပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်ရန် hashtag ကိုသုံးနိုင်သည်။ UGC လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်သူများသည်ဖောက်သည်များဖြစ်လာနိုင်သည်။
Twitter Retweet သို့မဟုတ် Hashtag ပြိုင်ပွဲများ - ပရိသတ်များကို Twitter မှမထွက်ခွာဘဲသင့်ပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်ရန်ခွင့်ပြုပါ။ ပါဝင်သူများအားသင်၏ထူးခြားသောပြိုင်ပွဲ hashtag ဖြင့်တွစ်တာသို့တင်ရန်ပြောပါ။ ထိုပို့စ်များကို ShortStack တွင် entries များအဖြစ်စုဆောင်းပါလိမ့်မည်။ တင်ပို့ချက်တိုင်းသည်သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့် ပါတ်သက်၍ စကားလုံးများပျံ့နှံ့စေပြီးသင်၏အမှတ်တံဆိပ်၏ထိတွေ့မှုကိုတိုးပွားစေသည်။
Instagram ဖော်ပြခြင်းပြိုင်ပွဲများ - ပရိသတ်များအား Instagram မှထွက်ခွာခြင်းမပြုဘဲသင်၏ပြိုင်ပွဲသို့တင်သွင်းခွင့်ပြုသည်။ ၀ င်ရောက်သူများအား Instagram တွင်တင်ရန်နှင့်သင်၏ထူးခြားသောပြိုင်ပွဲ hashtag နှင့်သင်၏ Instagram စီးပွားရေးပရိုဖိုင်း၏ @mention ပါ ၀ င်ရန်ပြောပါ။ ထိုပို့စ်များကို ShortStack တွင် entries များအဖြစ်စုဆောင်းလိမ့်မည်။ ပို့စ်တိုင်းသည်သင်၏ထူးခြားသော hashtag နှင့်သင်၏ Instagram profile ကို @mention မှတဆင့်ဖြန့်ကြလိမ့်မည်၊
TikTok ဗွီဒီယိုပြိုင်ပွဲ - TikTok မှပရိသတ်များသည် platform ပေါ်တွင်ဗွီဒီယိုများဖန်တီးခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းသည်မည်မျှပျော်စရာကောင်းသည်ကိုသိကြသည်။ ယခုတွင်သင်သည်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုဝင်ရောက်နိုင်ပြီးသင်၏ဝင်ခွင့်ပုံစံဖြင့်ရိုက်ထည့်ရန် TikTok ဗီဒီယိုကိုပြိုင်ပွဲဝင်သူများအားတောင်းဆိုနိုင်သည်။ ဤသည်ကသင့်အားအရေးကြီးသော UGC များနှင့် ဦး ဆောင်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူဝင်ရောက်သူများ၏အီးမေးလ်လိပ်စာများနှင့်အမည်များကိုစုဆောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင်၏ Valentine's Day ပြိုင်ပွဲကိုယခုစီစဉ်ပါ။
ချစ်သူများနေ့အတွက်ပြိုင်ပွဲဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည့်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။
ထုတ်ဖော်: ကျွန်ုပ်တို့တွင်တွဲဖက်လင့်ခ်တစ်ခုရှိသည် က short Stack.
Tags: ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရမှတ်ချက်ပေးရန်Facebook ကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပြိုင်ပွဲhashtag ပြိုင်ပွဲinstagram ပြိုင်ပွဲretweet ပြိုင်ပွဲရေတိုဆိုရှယ်မီဒီယာပြိုင်ပွဲtiktok ပြိုင်ပွဲချစ်သူများနေ့ချစ်သူများနေ့ရဲ့ပြိုင်ပွဲValentine လက်ဆောင်
5:2014 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 2, 33 တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug Valentine's Day က အနံ့ဆိုးထွက်ပေမယ့် Facebook အက်ပ်တွေက ပိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးပါတယ်။